आज डलर सहित अन्य विदेशी मुद्राको भाउ कस्तो छ ? हेर्नुहोस्….
October 20, 2020 1530
मंगलबार केही देशको विनिमयदर बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनि’मयदर अनु’सार एक अमेरिकी डलरको खरि’ददर १ सय १७ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रि’दर १ सय १७ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरि’ददर ३ सय १० रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १२ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ । एक कुवेती दिनारको ख:रिददर ३ सय ८२ रुपैयाँ ८० पैसा तोकि:एको छ भने बिक्रिदर ३ सय ८४ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकि’एको छ ।
त्यस्तै एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिए’को छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकि’एको छ ।
एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै कोरियन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ २८ पैसा तोकि’एको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक युके पाउण्ड स्ट्रलि’ङको खरि’ददर १ सय ५२ रुपैयाँ २४ पैसा तोकि’एको छ भने बिक्रिदर १ सय ५३ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ। एक साउदी रियालको खरि’ददर ३१ रुपैयाँ २२ पैसा तोकि’एको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ ।
Prevबेपत्ता रहेका प्र’हरी जवान साउदकाे श’व पनि पर्यो फेला
Nextदशैंको मुखमा सुन तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस् आजको सुनको मूल्य
११ सन्तानकी आमा चाहन्छिन् अब थप १०० बच्चाहरु…
अन्तरजातीय बिबाहमा रमाएका जोडी, हिजोका गरिब आज करोडपति (भिडियो हेर्नुहोस)